Koo Hye-seon Shoes Polishing at Myeongdong - video.phpmyanmar.com
Koo Hye-seon Shoes Polishing At Myeongdong
Posted By - Ko Ko - June 4, 2010
Koo Hye-seon Shoes Polishing at Myeongdong for WinWinӔProgramme
Koo's reasons for not wearing dresses
Ku Hye Sun - Wikipedia , the free encyclopedia
Koo Hye-seon preparing to polish shoes
မေလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ အချိန်မှာ F4 မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာ Seoul မြို့ Myeongdong ရပ်ကွက်မှာ ဖိနပ် တိုက်ဆိုင် ဖွင့်ပြီး ဖိနပ်တိုက် ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ KBS 2TV ကပြု လုပ်တဲ့ WinWin လို့အမည် ပေးထားတဲ့ talk show အစီအစဉ် မှာပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။
Koo Hye-seon setting up shop
ဒီ talk show ရဲ့ Lets Meet Now-Keep Your Promise Project အစီအစဉ် မှာ ပရိသတ် ကို အောက်ပါ မေးခွန်း မေးခဲ့ ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာ မေလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ အချိန်မှာ Seoul မြို့ Myeongdong ရပ်ကွက်မှာ ဖိနပ် တိုက်ခဲ့ရင် ထိုတစ်ချိန် တည်းမှာ သင်ဘာလုပ် မလဲ?
Koo Hye-seon polishing ardently
ထိုအခါမှာ ပရိသတ် တွေက ဖုန်းဆက်ပြီး သူတို့ တစ်ချိန် တည်းမှာ ဘာလုပ် ပါမယ် ဆိုတာ TV အစီအစဉ် သို့လှမ်းပြီး ပြောကြ ရပါတယ်။ ပေါက်ကရ လေးဆယ် အဖြေ တွေကို ဖတ်ပြပြီး ဟာသ လုပ်တဲ့ အစီအစဉ် ပါ။
Ok, I'm closing up now
ထို့ကြောင့် မင်းသမီးး ဟာသူ့ ဂတိ အတိုင်း မေလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ အချိန်မှာ Seoul မြို့ Myeongdong ရပ်ကွက် သို့သွားပြီး ဖိနပ် တိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာရုပ်ရှင် ပွဲတော် တစ်ခုကို လည်း အဝတ်အစား မဝတ်ပဲ (ဖကိရှင် ကျကျ အမျိုးသမီး အဝတ်အစား မဝတ်ကဲ) ဘောင်းဘီ ရှပ် လည်စီး ဝတ်ပြီး တက်ရောက် လာတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
ကျွန်မကို ရုပ်ရှင် ပွဲတော် တွေက ဖိတ်တာဟာ ဒါရိုက်တာ အနေနဲ့ပါ၊ မင်းသမီး အနေနဲ့ ဖိတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် အခုလို ဘောင်းဘီ ဝတ်ပြီး လာခဲ့ တာပါ။ ဒါမှလည်း တခြား ဒါရိုက်တာ တွေနဲ့ ဆွေနွေးရတာ ပိုပြီး အဆင် ပြေပါတယ်လို့ မင်းသမီးက ရှင်းပြ သွားပါတယ်။
မင်းသမီးဟာ The Cheerful Caretaker အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတို တစ်ကား ကို 2009 က၄င်း၊ Magic အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတို တစ်ကား ကို 2010 က၄င်း၊ ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ရိုက်ကူး ခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ စွယ်စုံ ရသူ တစ်ဦး ဖြစ် ပါတယ်။ Boys Before Flowers (F4) ရိုက်နေဆဲ ကာလ မှာပဲ Tango လို့ အမည် ရှိတဲ့ novel တစ်အုပ် ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့ ပါတယ်။ စာအုပ် မျက်နှာဖုံး design ကို ကိုယ်တိုင် ဆွဲ ပါတယ်။
စာအုပ် အတွင်း မှာလည်း သူကိုယ် တိုင် ဆွဲတဲ့ သရုပ် ဖေါ် ပန်းချီ ၄၀ ကျော် ပါရှိ တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ စါအုပ် ကို March 31, 2009 က ထုတ်ဝေ ခဲ့ ပါတယ်။
လဝက် အတွင်း မှာ အုပ်ရေ ၃ သောင်း စံချိန် တင် ရောင်းချ ခဲ့ရ ပြီးရောင်း မလောက် လို့ ၇ ကြိမ်မြောက် ပုံနှိပ် ခဲ့ရ ပါတယ်။
သူရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတို တွေရဲ့ theme songs တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ခဲ့ ပါတယ်။ Piano လည်း ကောင်းကောင်း တီးတတ် ပါတယ်။
သူ ခေါင်ဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့တဲ့ Pure 19 (KBS1, 2006) ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ ဇာတ်ဝင် သီချင်း (themes song) ကိုလည်း ကိုယ်တိုင် သီဆိုခဲ့ ပါတယ်။
ဒါတင် မပြီးသေး ပါဘူး၊ သူဟာ SBS ရဲ့ (2006 - 2007) က music program ရဲ့ စီစဉ် တင်ဆက် သူ (host) အဖြစ် လည်း ဆောင်ရွက် ဖူး ပါတယ်။
SBS Drama Award (2007) ရဲ့ အခမ်း အနားမှူး (MC) အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ ပါတယ်၊ ဒီ အလုပ် တွေကလည်း လူတိုင်း လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် မဟုတ် ပါဘူး။
Summary - Koo Hye-seon took part in [Let-s Meet Now-Keep Your Promise Project] for KBS 2TV talk show [WinWin]. At the showaquestion was set [If Goo Hye Sun is to polish shoes on May 25 4pm at Seoul, Myeongdong, what will you do together with her]. Peolpe phone in to the show with assorted answers. on the promised date May 25 at 4pm, actress Koo Hye-seon went to Seoul, Myeongdong and polished shoes to fulfill her side of the promise.
End of Article - Koo Hye-seon Shoes Polishing at Myeongdong
momomin October 8, 2011 - 4:54 am
Getting the news ,for her ,give me for reason
WIlliam August 20, 2011 - 2:53 am
I am surprised suchapretty actress dare to do like this. Even there are dirts on her face, she is really cute
Poe Hlwar August 7, 2011 - 9:30 pm
zatkaung August 4, 2011 - 6:01 am
ချွန်တဲ့ သူမှ ပေါ က်တာတဲ့ သူထူး ချွန် လို့ အခု လိုထွန်း ပေါ က် ကျော်ကြား နေတာ ပေါ့အမြဲတမ်းအောင်မြင်နိုင်ပါ စေ ဗျာ
korea lover June 17, 2011 - 12:29 am
မျက်မှာ ပေ နေတာ တောင် ချစ်စရာ လေး ။ သူ style ကို ကြိုက်တယ် ။ သူနဲ့ သိခွင့် ရရင် ကောင်း မယ်။
rosalyn June 17, 2011 - 12:26 am
ဒီ လို လုပ်ရဲ လို့ ချီး ကျူး ပါ တယ် ။ ဂတိတည် တဲ့ လူတစ် ပေါ့နော် လေး စား ပါ တယ် ။ သူမ က ဘာဝတ်ဝတ် ကြည့်ကောင်း ပါ တယ် ။
သူရိန်မင်း February 4, 2011 - 9:23 am
နာမည် ကြီး မင်း သမီး ဖြစ် ပြီး အခုလို လုပ်ရဲ တာ ချီး ကျူး တယ် ဗျာ ..
firememe February 3, 2011 - 5:08 am
လူဆိုတာ ကောင်း တာကြီး ပဲ မှ မရှိတာ။ နောက်ကွယ်က ကိစ္စ တွေ ကို မသိနိုင်ဘူး လေ။ လူ အမှားရှေ့ မှာ လုပ်ပြနိုင်တဲ့ သတ္တိ တော့ရှိပါ တယ် လို့ ထင်တယ် ။
နှင်းနှင်း January 16, 2011 - 4:35 am
လေး စား တယ် ..ကတိဆိုတာတည် ဖို့မှ မလွယ်တာ.....
ကောင်းကင်အိမ်မက် January 5, 2011 - 8:11 am
မင်း သမီး ကို တော့ ချစ်သလိုလိုပဲ အဲဒါမျိုး မမတစ် ယောက် လောက်ရှိခဲ့ရင် ကောင်း မှာ ပဲ
ချစ်ကို December 28, 2010 - 3:45 am
မင်း သမီး koo Hye-sun ...ဟာ သူမဂတိ ပေး ခဲတည် စား အတိုင်း လုပ်ပြသွား တာကို တော် တော် လေး စား ဖို ကောင်း ပါ တည်
Nang Mo Hom September 18, 2010 - 5:19 am
She is not very beautiful but I admire her.
Bawi September 10, 2010 - 9:57 pm
I deadly love Koo Hye Seon. She is so Cute! I wanna kiss her!!!!
ဇေယျာမင်း August 25, 2010 - 6:34 am
I litte like that actress because of her acting
jim August 24, 2010 - 8:27 am
ဟုတ်မှာ ပါ ပံပိုး သူ တွေ က အများ ကြီး ကို မယုံရင်သွား မေး ပါ လား ph;082-114 ok
မအိ August 13, 2010 - 8:04 am
အင်း ..ဟုတ်တယ် နော်ကိုး ရီး ယား မင်း သမီး တွေ ထဲမှာ အဲ လိုမျိုး ဖော်ပြထား တာ..သူ့ကိုပဲ တွေ့ ဖူး သေး တယ် ။ အဲ လိုဘက်စုံ တော် တော့ ကောင်း တာ ပေါ့ ။ အား ကျတယ် ။
I khay August 9, 2010 - 5:28 am
I love koohyesun because I like her action.I favourite action in F4 movie .
john July 21, 2010 - 11:49 pm
I am admire koohyesun.so i am always look her movies.
ဖူးဖူး July 14, 2010 - 4:05 am
အဲဒါတကယ်လား ဟင် မိုက်တယ် နော်
Sarkaar June 22, 2010 - 7:44 am
I do really hate that actress!and i have heard that she will start her new production with T.O.P from Big Bang! how bad it is? so so damn!
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/490/koo-hye-seon-shoes-polishing-at-myeongdong
Rendering time 0.0446 sec *
85e6f3d6e9643b6baaf9617bc6f94760 - January 16, 2018 - 4:02:25 am